Erzurum ရှိ Peace Spring Viaduct သည် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရှိသည် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး25 ErzurumErzurum ရှိငြိမ်းချမ်းရေးစမ်းရေတွင်း Viaduct ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
08 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ငြိမ်းချမ်းရေး pinari viadugu ဝန်ဆောင်မှုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်
အေအက် (စ်) ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဌပါမောက္ခချုပ်သည် Erzurum Metropolitan Municipality Peace Spring Viaduct ၏အရေးအကြီးဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ Numan Kurtulmuş'unတက်ရောက်ခဲ့သည်။
Yılရိပ်သာလမ်းနှင့်Şükrüpaşaကိုဆက်သွယ်ပေးပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေစေရန်theရာမရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၏အဖွင့်တွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ AK Party ၏လက်ထောက်ဥက္ကK္ဌKurtulmuşသည်အခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏အရေးပါမှုကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Ul 70 ရာခိုင်နှုန်းသည် Peace Spring စစ်ဆင်ရေးတွင်အသုံးပြုသောလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၏ပြည်တွင်းဖြစ်ဖြစ်သည်။ တူရကီ '' ဟော့ '', ဟောင်းတူရကီမဟုတ်ပါဘူးသင်တို့သည်နောက်အစအဦး, Recep Tayyip အာဒိုဂန်လည်းမရှိဟုပြောသည့်အခါတစ်စုံတစ်ဦးကိုဘေးဖယ်ခြေလှမ်းမည်သူ၏သူရဲကောင်းခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်ရွေ့လျားနေတာ "ဟု၎င်းကဆိုသည်။ Kurtulmuşက Erzurum သည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရာမြို့တော်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူသည်ဖွင့်လှစ်သောကျောင်းဆောင်အားငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးဟူသောအမည်ကိုပေးရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူက“ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့နွေ ဦး ဟာအရေးကြီးတဲ့စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်မှာနေရတာဟာစျေးကြီးလွန်းတယ်။ အရှေ့ပိုင်းမြေထဲပင်လယ်၊ ပါလက်စတိုင်း၊ အီရတ်နှင့်ဘဂ္ဂဒက်တို့ကိုသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်းသည်ပထဝီအနေအထား၏ဗဟိုချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဘယ်မှာမှစာတစ်စောင်ပြန်ရေးသားခဲ့သည်သူတို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့ကြသည် '' တူရကီရှေးဟောင်းတူရကီ, 'ငါတို့သည်လည်းသူတို့ရှိရာအစွန်း,' မှာရပ်တန့်, ဒါပေမဲ့သူတို့မေ့တစ်ခုခုရှိ၏။ တူရကီဟောင်းတူရကီမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုက်လူတွေအကြားခိုက်ရန်ပပျောက်ဖို့ကး၏အကြမ်းဖက်စင်္ကြံဖျက်ဆီးဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုစစ်ဆင်ရေး၏စမ်းရေတွင်း, တူရကီရဲ့ထောင့်သို့ compressed အသိုက်မှတဆင့်ဤနေရာတွင်အကြမ်းဖက်သမားများကာကွယ်တားဆီးဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ကမိမိတို့၏ဘိုးဘွားများ၏သူရဲကောင်းများနှင့်သူတို့၏အကောင့်များကိုပြန်လည်ဖွင့်ချင်သောသူတို့၏အကောင့်များကိုပိတ်ပစ်ရန်ငြိမ်းချမ်းရေး၏နွေ ဦး စစ်ဆင်ရေးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ” AK Party ၏လက်ထောက်ဥက္ကဌ Prof.Dr. ဒေါက်တာ Numan Kurtulmuşသည်သူ၏မိန့်ခွန်းတွင် Erzurum မြို့တော်ဝန် Mehmet Sekmen ၏အက်တမ်ပုရွက်ဆိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ Kurtulmuşက "ဒါဟာ Erzurum မှာ ဦး နှောက်တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်များစွာသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသနားတော်မူပါစေသော။ Erzurum ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်အနုမြူပုရွက်ဆိတ်ကဲ့သို့ပင်ကြိုးစားအားထုတ်သည်။ AK ပါတီအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ၀ န်ကြီးများအားကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခဲ့သည်။
Erzurum တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mehmet Tab ကို, "ဟုတူရကီအတွက်ဒေသခံအစိုးရများပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတော်သမ္မတမစ္စတာ Recep Tayyip အာဒိုဂန်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးချဉ်းကပ်မှု, ရဲ့ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကာလတှငျနထေိုငျချီးမွမ်းကြလော့သောအမြော်အမြင်ရှုထောင့်ကိုရှေ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်အသစ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှကျေးဇူးတင်စကား," ဟု၎င်းကပြောသည်။ အကယ်၍ AK ပါတီမတိုင်မှီကာလအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ဒေသန္တရအစိုးရများသည် AK ပါတီ၏မူလလက္ခဏာကိုရရှိခဲ့ကြောင်းBaşkanကပြောကြားသည်မှာသမ္မတ Sekmen က“ စီမံကိန်းစည်ပင်သာယာရေးဟာအမြဲတမ်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေတယ်။ စတိုင်၏လိပ်စာမှာ“ AK ပါတီမြူနီစီပယ်များ” ဖြစ်သည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းမှသည် AK ပါတီမြူနီစီပယ်ဒေသတွင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအထိ…အခြေခံအဆောက်အ ဦ ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာမှ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစီအစဉ်မှ…ဗေဒမှယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့်အားကစားအထိသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုထည်မှသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားသောစည်ပင်သာယာရေးပုံစံကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ AK ပါတီ၏ဒေသန္တရအစိုးရကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Z ERZURUM ကိုဆွဲဆောင်မှုဗဟိုဌာနကိုလှည့်လိုက်ပြီ”
မြို့တော်ဝန် Mehmet Sekmen က Erzurum သည်မြို့တော်၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်မှု၏ဗဟိုဖြစ်လာသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတ Sekmen ကအောက်ပါအတိုင်းဆက်ပြောသည်။ Erzurum Erzurum သည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်နေသောစီမံကိန်းများနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင်မှတ်မိနိုင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒေသတွင်မကြာသေးမီအချိန်အထိလယ်ကွက်များနှင့်မြေလွတ်များပါဝင်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ကြီးထွားလာခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ယနေ့ရာထောင်ချီသောပြည်သူပြည်သားများ၏နေအိမ်များဖြစ်သော Erzurum တွင်အမြင့်ဆုံးသောအခြေချနေထိုင်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်မြို့လယ်ခေါင်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်းသင်သိသည်၊ ဤဒေသသို့သွားရန်မှာအလွန်ခက်ခဲပြီးခက်ခဲသည်။ သင့်ထံမှတောင်းဆိုချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ Erzurum မြို့လယ်နှင့်Şükrüpaşaဒေသနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အတိုဆုံးနည်းဖြင့်မည်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ပြီးဤစီမံကိန်းကိုတင်ခဲ့သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဤဒေသတွင်နေထိုင်ကြသောနိုင်ငံသားများသည်တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်းမြို့လယ်သို့ရောက်ရန်အခွင့်အရေးရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဤ viaduct သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကွာအဝေးကိုတိုစေရုံသာမက တစ်ချိန်တည်းမှာပင်Şükrüpaşaသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသကို ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုံးခန်းဖွင့်ချိန် မှစ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များကိုတစ်နေ့တာ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ သင်သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောအခြားအလုပ်တစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏Şükrüpaşaဒေသကိုလေဆိပ်လမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းမှYıldıkkent၏ညွှန်ကြားမှုအထိအလွန်အသုံး ၀ င်သောမြေအောက်လမ်းခရီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုအသုံးချခဲ့သည်။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်အဖွင့်စိတ်အားထက်သန်မှု, ကျနော်တို့အဲဒီမှာနောက်တဖန်နထေိုငျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွင် Erzurum တစ်ဝှမ်းလုံးရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်အသစ်များအားတီထွင်ခြင်း၊ ငါတို့ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သောကြောင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့ကိုသိမ်းဆည်းရန်စဉ်းစားခြင်းမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Erzurum ၏အနာဂတ်နှင့်မနက်ဖြန်၏လိုအပ်ချက်များကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ ınမိန့်ခွန်းများအပြီးတွင်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
Antalya Metropolitan မှ Peace Spring Operation သို့အလံအထောက်အပံ့ပေးသည် 14 / 10 / 2019 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအားကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးရန်ဥဖရတ်အရှေ့ဘက်ရှိတူရကီစစ်တပ်သည် Antalya Metropolitan Municipality သည်တူရကီအလံကိုချိတ်ဆွဲထားသည်။ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏လျှောက်လွှာ Antalya ၏လူတို့ကတန်ဖိုးထားခဲ့သည် ...
Boğazköprüလမ်း၊ Bünyanဖလှယ်ရေးနှင့် Derevenk Viaduct ဖွင့်ပွဲ 20 / 10 / 2019 Kayseri တွင်ပြီးစီးခဲ့သောစီမံကိန်းများစွာကိုသမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanကသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်း ၀ န်ကြီး Murat Kurum၊ အမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီး Ziya Selçuk၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Hulusi ine
ဓါတ်ရထားဘူတာငါးဖမ်း Shelter န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖွင့်လှစ် 06 / 10 / 2017 ဆမ်ဆန်မီးရထားမီးရထားစနစ် (SAMULA tr) မှမောင်းနှင်သောတံတား၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသောတံငါသည်၏ခိုလှုံရာရထားဘူတာသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးမပြုခဲ့ပါ။ ခရီးသည်များ၏လုံခြုံမှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များကို duran ပိတ်ထားသည်
ရှေ့ဆက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်Bursanınကေဘယ်လ်ကားပေမယ့်narçiçeðiအစိမ်းရောင်-အဖြူပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု 21 / 05 / 2013 ကေဘယ်လ်ကားစစ်တမ်း၏ရှေ့မှောက်၌အစိမ်းရောင်ဖြူဖြစ်သော်လည်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိကေဘယ်ကားသစ်များအရောင်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်မြို့ပြစည်ပင်သာယာရေးသည်စိမ်းလန်းသောအဖြူရောင်အရောင်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ပိုးထည်အရောင်၊
DagkapI မှစ. - Kayapınaraရထားလမ်းစနစ်က 15 / 05 / 2013 Dağkapıdan - Kayapınaraရထားလမ်းစနစ် Diyarbakırမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအတွင်းရေးမှူးချုပ် Fahrettin ÇağdaşUlaşım
Antalya Metropolitan မှ Peace Spring Operation သို့အလံအထောက်အပံ့ပေးသည်
ဓါတ်ရထားဘူတာငါးဖမ်း Shelter န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖွင့်လှစ်
DagkapI မှစ. - Kayapınaraရထားလမ်းစနစ်က
Halkapınarယာယီအသွားအလာအစီအစဉ်များကတော့မြေအောက်ရထား Car တွင်သိမ်းဆည်းထားမည်
Cinar Izmir ကုန်ကား, Tram တောင်တက်အံဝင်ခွင်ကျအတွက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်